पशुको दिसाबाट कफी ! - बडिमालिका खबर
विश्वमा कफी पारखिको कमी छैन । कफीको स्वाद र सेवनपछि पाउने पुर्नताजगीले मानिसलाई कफी पिउन प्रेरित गर्दछ । त्यसैले मानिसहरु मंहगो मुल्य तिरेर भएपनि कफी पिउने गर्दछन् । तर एउटा सामान्य कफीको कति मुल्य पर्ला ? बढिमा एकहजार ?
यसरी सिवेटले खाएर दिसामा निस्किएको कफीको गेडालाई सफा गरिन्छ । त्यसपछि यसलाई किटाणुरहित पारेर भुटिन्छ र कफी तयार पारिन्छ । यसरी सिवेटको पेटमा रहदाँ कफी अझ गुणस्तरीय र पौष्टिक हुन पुग्दछ । सोहि कारणले यसको मुल्य महंगो पर्दछ ।